Knowledge – DigitalTimes.com.mm
Knowledge Local NEWS Oppo
ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများပါဝင်နေသည့် OPPO F11 Jewelry White Limited Edition အရောင်သစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးတော့မည်
ပုလဲဆိုသည်မှာ နဝရတ်ကိုးပါးတွင် ပါဝင်သော ရတနာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားဝတ်ဆင်တတ်ကြပါသည်။ နဝရတ်ကိုးပါးတွင် ပါဝင်သော ရတနာပစ္စည်းများသည် ထူးခြားလေးနက်မှုများနှင့်အတူ သူ့ဂုဏ်သတ္တိနှင့်သူရှိကြပါသည်။ ထို့အတူပင် ပုလဲတွင်လည်း ‘ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိခြင်း’၊ ‘အေးချမ်းတည်ငြိမ်ခြင်းကို…
ဖုန်းတွေ စမတ်နာရီတွေနဲ့ တခြားတခြားသော Device တွေရဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေက သူတို့ပစ္စည်းတွေရေစိုခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Apple တို့ Sony တို့ Samsung…
လူကြားသူကြားထဲရောက်လို့ စမတ်ဖုန်းကိုသုံးရတော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းကို ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မတင်ထားသင့်ပါဘူး။ ဒါက ကိုယ်နဲ့အတူတူထမင်းစားနေတဲ့သူအပေါ် ရိုင်းရာကျပါတယ်။ ချိန်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းခေါ်တာ၊ စာပို့တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးနေတာ စတာတွေမလုပ်တာကောင်းပါတယ်။…
Camera စမတ်ဖုန်းထုတ်ကုမ္ပဏီတွေက ဖုန်းတွေကိုဈေးကွက်တင်တဲ့အခါ ဘယ်လောက် MP ဆိုပြီး ဂဏန်းတွေနဲ့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကတကယ်လည်း သုံးတဲ့သူတွေအတွက် စဉ်းစားရတာလွယ်စေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် megapixel တူတဲ့ကင်မရာချင်းအတူတူတောင် sensor အရွယ်အစားကွာသွားတာနဲ့ ရလဒ်တွေကွဲသွားမှာပါ။…
FEATURES Knowledge Mobile & Tablets
OnePlus, Oppo နဲ့ Vivo တို့ကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲက ပိုင်တာ သင်သိပါသလား ?
စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ OnePlus , Oppo နဲ့ Vivo တို့ဟာ တရုတ် ကုမ္ပဏီကြီး BBK Electronics ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲများဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ?…
Battery ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ တော်တော်များများသိချင်ကြတာက ဘက်ထရီဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာပါ။ တစ်နေ့တောင် ကောင်းကောင်းမခံတဲ့ဘက်ထရီကိုတော့ ဘယ်သူကမှ မသုံးချင်တာတော့ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘက်ထရီသက်တမ်းဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာက ကိုယ်ဘာတွေသုံးလဲဆိုတာပေါ်လည်း မူတည်နေပါသေးတယ်။ mAh အရှည်ကတော့ milli…
မနေ့က display နဲ့ resolution အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ ဖုန်းတွေရဲ့ကိုယ်ထည်မှာအသုံးပြုတဲ့ material တွေနဲ့ RAM, Processor, Operating System တွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ Materials…
နည်းပညာဆိုတာကလည်း လိုက်မမီလွန်းအောင် မြန်နေပြီး စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတိုင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းရအောင်ကြိုးစားလာကြတဲ့အခါ သူတို့သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ နောက်တစ်ခါဖုန်းဝယ်တဲ့အခါမှာတော့ အထောက်အကူပြုလိုပြုုငြားပေ့ါ။ ပြောပြပေးသွားမှာတွေကတော့ Display, Screen Resolution, Materials, RAM,…
ခုတစ်လောပိုင်းကတော့ Apple က iPhone တွေကို နှေးအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပွက်လောရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Android ဖုန်းထုတ်သူတွေဖြစ်တဲ့ HTC, LG, Huawei နဲ့ Samsung တို့ကတော့…
NFC ကို ဘာအတွက်သုံးနိုင်မလဲ?? ၁. ဖုန်းနံပါတ်ပေးပို့နိုင်ခြင်း သူနဲ့သာဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်ပို့ချင်ရင်ဘာဂဏန်းမှတောင်ရိုက်နေစရာမလိုပါဘူး။ contact/ address book ကနေ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ contact ကိုထောက်ပြီး တခြားဖုန်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ဖုန်းလေးတင်၊…
အရင်တလောကပဲ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ်ပါရမယ့်အရာတွေနဲ့ ပါသင့်တဲ့အရာတွေအကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာ NFC ဆိုတာလေးပါပါတယ်။ ဒီတော့ NFC ဆိုတာဘာလဲ ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ NFC ဆိုတာဘာလဲ?? NFC…
စိတ်ကျန်းမာရေးနိုင်ငံတကာဂျာနယ်ကနေ ဆယ်လ်ဖီအလွန်အကျွံရိုက်ခြင်းက “Selfitis” လို့နာမည်တပ်ထားတဲ့ စိတ်ရောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ စာရင်းသွင်းထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဒီနာမည်နဲ့နာမည်တပ်ခဲ့ပေမယ့် သတင်းမှားသာဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုကတော့ တကယ်နာမည်စာရင်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လ်ဖီအလွန်အကျွံရိုက်သူတွေကို ခေါင်းစဉ်ပြန်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာ အခြေအနေတွေကိုလိုက်ပြီး…
တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖုန်းဝယ်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဝယ်မယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ရှိကိုရှိရမယ့် feature တွေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ feature လေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားပါမယ် “Must-Have features” ပထမအနေနဲ့ ဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆို…